China Iphise Tattoo Magetsi Kugadzira uye Fekitori | MOLONG
Maviri Kudzora Modes Dhijitari Simba sosi yeTattoo michina Multifunctional Red Skull Tattoo Power Supply
1. Simba rekushandisa rine bhatani renguva, tinya kumisikidza kutanga uye kumira, refu dhinda masekondi matatu kusvika zero kuchenesa
2. Nekuwedzera uye kubvisa mabhatani, refu yekudhinda inogona kuenderera ichiwedzera uye kubvisa magetsi.
3. Iva nhanho refu uye jog mbiri nzira yekuchinja.
4. Mabhatani mana anogona kumisikidzwa kuchengetedza basa rechina-rekuraira voltage.
5. Dual mode kutendeuka
6. Ndangariro basa
7. Basa rekuita nguva
MOLONG TATTOO SUPPLY inyanzvi yezvigadzirwa zvematato uyo anga ari mundima iyi kwemakore mazhinji. Isu CHETE tinopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamitengo yemakwikwi uye tinopa yakanakisa mushure mekutengesa sevhisi. Isu tinopa hombe sarudzo yematuru macartridge, akaraswa matipi matipi, matipi emazano, matinji, tsono tsono, michina yetatoo, mateki eteki, magetsi emagetsi, zvekuboora uye zvekushongedza tattoo. Takazvipira kuita zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nekupa vimbiso yemhando yepamusoro. Isu tiri tisingaregi kukudziridza iwo matsva masitayera.
1. Chii chingave kurongedza?
Kurongedza nemuchina wedu, Kwakarerekera kurongedza, kurongedza kweOEM (Kana huwandu hwakawanda hukakumbirwa, vanogona kuisa logo yavo mupakeji, ive inotaurirana)
2. Hungave hunhu sei?
Isu tinovimbisa zvigadzirwa zvavanowana zvakakwana, zvakachena, zvinoshanda-zvakanaka.
Iyo Fekitori Inspector inosimbisa kuti mapakeji acho ari mumamiriro akanaka asati atumirwa. Uye zvakare, kune chero dambudziko unogona kubata MOLONG mushure mekutengesa, unogona kuwana mhinduro uye mhinduro.
3. Mutengo upi watinawo?
Mutengo wefekitori. Isu tiri vagadziri, isu tinogona kupa yemakwikwi mitengo. Kunyanya kune vekutengesa, mutengo wakakosha kwavari kuitira kuti uvabatsire kuwedzera musika wavo nekukurumidza.
4. Ndingawana sei masampuli?
Inotaurika. Kazhinji isu hatipe mahara emahara. Mumamiriro mashoma vatengi vanofanirwa kubhadhara kuendesa, uye isu tinotumira masampuli ekubata, tsono uye zvimwe zvekushandisa. Kune vangangove vatengi, isu tinopa zvimwe zvakakosha zvaderedzwa.
5. Kutakura kwacho kunotora nguva yakareba sei?
Kutumira ne Express seDHL, UPS, Fedex, TNT, EMS nezvimwe, kazhinji mazuva matatu kusvika gumi,
Kutakura nengarava, zvinotora pakati pemazuva gumi nemashanu kusvika makumi mashanu.
Zvinoenderana nezvikonzero zvehuwandu hwehuwandu, mumiririri, chinhambwe, uye nzira yekubvisa yetsika, nezvimwe.
6. Ndedzipi nzira dzekubhadhara?
T / T (kuendesa kubhangi), Western Union, Paypal, Alibaba vimbiso yekubhadhara, Alipay Etc.
Pashure: Yakakwira mhando Yakavezwa mapatani Tattoo Simba isiri-inotsvedza Multifunctional Dhijitari Tattoo Magetsi
Zvadaro: MO isina waya kuchaja Tattoo magetsi
Bhatiri Powered Tattoo Pfuti
Bhatiri Powered Tattoo Muchina
Bhatiri Tattoo Simba Rinopa
Rechargeable Tattoo Magetsi
Tattoo Muchina Simba
Tattoo Simba Rinopa Mutsoka Pedal
Tattoo Wireless Magetsi
Isina waya Tattoo Muchina Magetsi
Wireless Tattoo Magetsi
BMX TPN033 Tattoo Simba Rinopa
TP-7 THUNDERLORD tattoo magetsi
Mhoro II isina waya Tattoo magetsi
Aurora 2 Tattoo Magetsi
Mhoroi III Tattoo Bhatiri magetsi emagetsi
MO isina waya kuchaja Tattoo magetsi